Pierre wasePiha-Amaxesha amnandi Qala Apha! - I-Airbnb
Pierre wasePiha-Amaxesha amnandi Qala Apha!
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguSusannah
Iliza lakho lilindile!
Khawube nomfanekiso wakho uhleli phambi kwe-Honey Honey epholileyo yokutshisa iinkuni? Ubusika bunomlingo wabo - jonga izaqhwithi ziqengqeleka kuLwandle lwaseTasman ngelixa ugqunywe phambi komlilo.
Umtsalane wePiha Tiny House kwindawo entle, etyhutyhayo yaseWest Coast ePiha Beach enombono omangalisayo kwiintlambo, unxweme olumnyama lwesanti kunye nolwandle. Vuka ujonge lo mbono yonke imihla kwaye uhambe uye kulwandle ujonge kumgangatho ogqatswe lilanga ongqongwe ngamatyholo omthonyama.
Indlu encinci yasePiha enomtsalane ebizwa ngokuba yi "Doris Jean Retreat" ime kwindawo entle, emagqagala kuNxweme oluseNtshona ePiha Beach enembono emangalisayo kwiintlambo, unxweme olumnyama nolwandle. Indlu kunye nedesika yangaphandle ijikelezwe ngamatyholo omthonyama; ebusuku yonwabele iglasi yewayini ujonge ukutshona kwelanga okumangalisayo phezu kweTasman, kunye nembonakalo yekristale yesibhakabhaka esiqaqambe ngokungaqhelekanga saMazantsi esibhakabhaka esizele ziinkwenkwezi. Indlu encinci ibandakanya ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela Igumbi lokuhlala elineplani evulekileyo, igumbi lokulala eliphezulu elinesibane esibhakabhakeni kunye nebhedi elingana nenkosi, kunye negumbi lokulala elilingana nebhedi enye.Kukwakho nedesika enkulu ejonge elwandle, kunye neCubana ukusuka kumgangatho osezantsi.
Eli ligumbi lokulala le-3 elinebhedi e-Queen epholileyo kunye nebhedi eyodwa. Oku kufumaneka ngentlawulo eyongezelelweyo ukuba unabahlobo oza kuhlala nabo.
Oku kusekwa ngokuzimeleyo ngabahlali!
4.66 out of 5 stars from 291 reviews
4.66 · Izimvo eziyi-291
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi291
Ulwandle oluhle, olunomfanekiso oqingqiweyo wePiha kuNxweme oluseNtshona oluneendlela zalo ezinde ezijikajikayo, iilwandle zesanti emnyama, unxweme olumagqagala kunye neentlambo ezigqunywe ngamatyholo omthonyama. Ukuhamba ngemizuzu emi-5 ukuya elwandle oluyimbali kunye neekhefi zalo, ivenkile ngokubanzi kunye neposi. Kwaye uhambo lwemizuzu emi-5 ukusuka kwiindlela zelizwe zokunyathela/ukunyuka intaba ezifana neSir Edmund Hilary Trail.
Umbuki zindwendwe ngu- Susannah
Ukusebenzisana phakathi komnini kunye neendwendwe ngokubhaliweyo okanye nge-imeyile. Umnikazi uhlala eNew York.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Piha